सबैभन्दा बढी कमाई गर्ने सेलिब्रिटीमा सलमान पहिलो नम्बरमा, को कतिमा ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalसबैभन्दा बढी कमाई गर्ने सेलिब्रिटीमा सलमान पहिलो नम्बरमा, को कतिमा ?
Home मनोरञ्जन सबैभन्दा बढी कमाई गर्ने सेलिब्रिटीमा सलमान पहिलो नम्बरमा, को कतिमा ?
काठमाडौं : फोर्ब्सले सबैभन्दा ज्यादा कमाई गर्ने भारतीयको सूची जारी गरेको छ । सो सुचीमा सलमान खान लगातार तेस्रो बर्ष पनि सबैभन्दा ज्यादा कमाई गर्ने सेलिब्रिटी बनेका छन् । सलमानले १ अक्टोबर २०१७ देखि ३० सेक्टेम्बर २०१८ को बिच २५३.२५ करोड भारतीयरुपैयाँ कमाए। भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहली २२८.०९ करोड भारतीय रुपैयाँ कमाई गरेर सुचीको दोस्रो स्थानमा छन् ।
त्यस्तै अक्षय कुमारको नाम तेस्रो स्थानमा छ । उनको कमाई १८५ करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ । चौथो नम्बरमा दीपिका पादुकोण रहेकी छन् । उनको कमाइ ११२ करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ । टप ५ भित्र पर्ने दीपिका एक मात्र महिला हुन् । महेन्द्र सिंह धोनी १०१.७७ करोड भारतीय रुपैयाँ कमाई गर्दै पाँचौ नम्बरमा छन् ।
त्यस्तै आमिर खान ९७.५ करोड कमाइ गर्दै सुचीको छैठौं स्थानमा रहेका छन् । उनले गत बर्ष ६८.७५ करोड भारतीय रुपैयाँ कमाएका थिए । ९६.१७ करोड भारतीय रुपैयाँ कमाइ गर्दै अमिताभ बच्चन सातौं स्थानमा रहेका छन् । रणवीर सिंह ८४.६७ करोड भारतीय रुपैयाँ कमाइका साथ आठौ स्थानमा छन् । साथै सचिन तेन्दुलकर ८० करोड कमाइ गर्दै नवौ स्थानमा रहेका छन् भने अजय देवगन ७४.५ करोडका साथ १० औँ स्थामा छन् ।
सलमानको कमाई एक बर्षमा ९ प्रतिशतले बढेको छ भने विराट कोहलीको कमाईमा १२६ प्रतिशत बढ्यो । त्यस्तै अक्षय कुमारको कमाई एक बर्षमा ८८ प्रतिशत , दीपिका पादुकोणको ६६ प्रतिशत र महेन्द्र सिंह धोनीको आमदनी ६० प्रतिशतले बढेको छ ।
प्रियंका चोपडा सूचीको ४९ औ स्थानमा छिन् । अघिल्लो बर्ष उनि ४२ औ नम्बरमा थिइन् । उनको कमाईमा गिरावट आएको छ । एक बर्षमा प्रियंकाको कमाइ ६८ करोड भारतीय रुपैयाँबाट घटेर १८ करोड भारतीय रुपैयाँ भएको छ ।
शाहरुख खान दोस्रो नम्‍बरबाट झरेर यस बर्ष १३ औँ नम्बरमा पुगेका छन् । उनको कमाई ५६ करोड भारतीय रुपैयाँ मात्र रहेको छ । अघिल्लो बर्ष उनले १७०.५० करोड भारतीय रुपैयाँ कमाएका थिए ।
३१ करोड भारतीय रुपैयाँ कमाई गरेर पवन कल्याण २४ नम्बरमा रहेका छन् । पवन तेलुगु फिल्मका एक्टर रहेका छन् । आन्ध्र प्रदेशमा उनने जन सेना पार्टी बनाएका छन् । उनि चिरन्जीवीको कान्छा भाइ हुन् ।
सूचीमा भारतीय लेखक अमिष त्रिपाठी र चेतन भगतको नाम पनि रहेको छ । टू स्टेट्स जस्तो चर्चीत किताबका लेखक चेतन ८.७५ करोड भारतीय रुपैयाँको कमाई गर्दै ९० औ स्थानमा रहेका छन् । त्यस्तै ६.५ करोड भारतीय रुपैयाँ कमाई गर्दै अमिष ९५ औँ स्थानमा छन् । उनि शिव ट्रियालोजीका लेखक हुन् ।
सो सूचीमा एकै परिवारका दुई व्यक्ति पनि रहेका छन् । यसमा विराट कोहली-अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन-ऐश्वर्या राय बच्चन, करीना कपूर-सैफ अली खान, अनिल कपूर-सोनम कपूर शामिल रहेका छन् ।
अध्यक्ष दाहाल नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग भित्रभित्रै असन्तुष्ट, यस्तो छ कारण
“मेरो लागि अन्तिम पटक सेयर गरिदिनु न प्लिज” भन्छन – प्रितम आचार्य
काठमाडौँको ठमेलमा पहिलो पटक धमाका मचाउदै नेहा कक्कड़